Kegel လေ့ကျင့်ခန်း - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အချို့သောအမျိုးသားများသည်ယင်းတို့ကိုကျိန်ဆိုခြင်းအားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းလာစေရန်တွန်းအားများကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်လူတစ် ဦး ၏သတိပေးချက်မှာ -
ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်မှာနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ကျွန်တော်ဟာနာတာရှည်တင်းကျပ်တဲ့ကြမ်းပြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ ဆန့်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်းနည်းစနစ်များအပြင်အနှိပ်များစွာမှတစ်ဆင့်ငါနှင့်အတူပါလာသော Hard-flaccid၊ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်အထွေထွေအဆင်မပြေမှုများကိုငါဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီ။
သင့်တွင်နာတာရှည်တင်းကျပ်သည့်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ဒီမှာရှိတဲ့လူတချို့ကသူတို့ရဲ့ ED ကိုပြုပြင်ဖို့ kegel လေ့ကျင့်ခန်းကိုကြိုးစားခဲ့တယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေကို, သင့် kegels ကောင်းပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ kegels ကကျွန်တော့်တင်းကျပ်တဲ့ကြမ်းပြင်ကိုပိုဆိုးစေတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ Kegel လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မစတင်မီဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
တစ်ချိန်ချိန်, သငျသညျများလွန်း kegel လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစေခြင်းငှါ:
ဒီတော့ငါဒီ reboot မှာကောင်းကင်တမန်မရှိဘူး။ မကြာသေးမီက twitter ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင်ထိုအရာကိုဖြတ်တောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါမကြာသေးမီကရခဲ့သည့်တစ် ဦး ကဗျာဒိတ်တော်ငါခဲယဉ်းရရန် kegels အလွန်အမင်းအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ PIED လျော်ကြေးငွေအဖြစ်စိမ့်ဝင်ခြင်းနှင့်အလေ့အထသို့တီထွင်သောအခါစတင်ခဲ့ဖြစ်ကောင်းထင်ပါတယ်။ လိင် / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဤနည်းဖြင့်၊ ကြွက်နို့သည်နာကျင်ကိုက်ခဲပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် PC ကြွက်သားအားပြင်းထန်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဆီးကျိတ်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါနဲ့ဒီအကျင့်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ် PE ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းသောစိုက်ထုတ်မှုများကိုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည် (PC ကြွက်သားများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်လည်း PE ကိုအထောက်အကူပြုသည်) ။ PC ကြွက်သားများကိုတင်းမာစေသောလုပ်ရပ်သည်စိုက်ထူခြင်းနှင့်တည်မြဲသောစွမ်းအားအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု မှလွဲ၍ အခြားအရာမရှိပါ။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင်သင့်ဝန်ကိုရိုက်ရန်သာအသုံးပြုပါ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သင်သည် reboot တစ်ခုတွင်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိရန်လိုအပ်သည်။ သင်ဒီမှာနှင့်ရှုပ်ထွေးပါကသင်ပြုလုပ်ခဲ့သောတိုးတက်မှုအားလုံးကိုမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ အဓိကသော့ချက်မှာအရူးမသွားရန်ဖြစ်သည်။ အရူးမူး။ ဒါ့အပြင်တကယ့်ရန်သူဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်။ ငါဝေးဝေးနေတဲ့အခါငါပိုပြီးသဘာဝကလမ်းအတွက်အမျိုးသမီးတွေကြည့်ပါ။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်လွတ်လပ်သည်။ ရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိသကဲ့သို့အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းမရှိဘဲသူမမျက်လုံးများကိုငေးကြည့်မိသည်။ သူမ၏လှပသောထင်မြင်ယူဆချက်ထက်သူမ၏အလှအပကိုသာတန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏မကြာသေးမီက twitter ညစ်ညမ်းသောမစ်ရှင်များကတည်းကကျွန်ုပ်အတွက်ဤအဖြစ်မှန်ကိုအမှန်တကယ်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ငါ၏အထိုးထွင်းသိမြင်မှုအထောက်အကူဖြစ်စေနှင့်အမြင်ဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့လုပ်ဖို့သတိရ "ပြောင်းပြန် kegels" များလွန်း။ တစ်ခုမှာယောက်ျားတစ်ယောက်သတိပေးခဲ့သည်:
နောက်ကျော kegels မပါဘဲအထူးကြပ်မတ် kegel လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) PE (အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း) ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏ kegel ကြွက်သား၌မညီမမျှဖြစ်နေသောအခါသင်၏“ ဆွဲ” သည့် kegel သည်“ တွန်းချခြင်း” kegel ထက်များစွာပိုမိုအားကောင်းလိမ့်မည်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတင်းအဓမ္မ kegels များကိုထုတ်ပေးသည်။
သင်၏အထုပ်ကိုအသုံးမပြုစဉ်ကျန်းမာစွာထားရန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ကြွက်သားများတည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုသောကောင်းမွန်သော kegel လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုချမှတ်လိုက်ပြီးခြောက်သွေ့ခြင်း (သို့) အပြန်အလှန်အော်ဂဇင်ပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ သင် PE မှခံစားနေရပါက၎င်းသည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ထိုအခါမူကား၎င်းသည် kegels မဟုတ်ပါ ပြောင်းပြန် kegels။ ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးသင့်ကိုတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကိုသက်သာစေပြီးတင်းမာမှုလျော့နည်းစေသည်။ PE မကြာခဏတင်းတင်းတင်ပါးဆုံရိုးကြမ်းပြင်၏ရလဒ်ဖြစ်သောကြောင့်ဤသည်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သင်နှင့်ကိုက်ညီသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။ PE မှသင်ခံစားရလျှင် kegel များများမသုံးပါနှင့်။ အဲဒီအစားပြောင်းပြန် kegels အာရုံစိုက်ပါ။ သင်ဤအရာအားလုံးကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ။
ဤတွင်ရဲ့ ပြောင်းပြန် Kegel ညွှန်ကြားချက်၏အခြားအစုs.
ဒီ Vist က်ဘ်ဆိုက် (ED အပါအဝင်) တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမှုများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးသူကိုသုတေသီတစ် ဦး အားဖြင့်။
အထက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်မှယူထားသောဤဆောင်းပါးသည် ED နှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းခင်းလေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
အတော်များများကယောက်ျားအခက်အခဲစိုက်ထူရရှိမှုသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူပျံ့နှံ့တိုးရှိသည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုမိတ်ဖက်များအတွက်ကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်လုံလောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ပြင်းထန်မှု, ပျော့အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။7မှကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို 8 အောင်မြင်ရန်အဘယ်သူသည်အမျိုးသားများအတွက် 10 ထဲကကြိုးစားနေ4ထဲက6မှ 10 အောင်မြင်ရန်သောသူတို့အားအလယ်အလတ်ခွဲခြားနေကြပြီး,0ထဲက3မှ 10 အောင်မြင်ရန်သောသူတို့အားပြင်းထန်ခွဲခြားနေကြတယ်, ပျော့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အတိအကျကိုပျံ့နှံ့မသိနိုင်ပါဘူး။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအသက် 20 နှစ်အတွင်းအသက်အရွယ်နှင့်ယောက်ျား၏ထက်ပိုမို 40% ၏ 50 နှစ်အတွင်းယောက်ျား၏ 40% ထက်ပိုပြီးအသက် 66 နှစ်အောက်ယောက်ျား၏ 70% ထက်ပိုမိုသက်ရောက်သည်။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလိင်တံရောက်ရှိမလုံလောက်အသွေးတော်၏ရလဒ်, အားနည်းတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သား, လိင်တံအတွင်းကြွက်သားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအနားယူရန်, ဟော်မုန်းမူမမှန်, အာရုံကြောပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် psychogenic အချက်များအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ တချို့ကဆေးဝါး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောသွေးတိုး, နှလုံးရောဂါနှင့်များတွင်ဆီးချိုရောဂါအဖြစ်လက်ရှိ Co-ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျား၏ သာ. ကြီးမြတ်နံပါတ်များကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ သည်အခြားအန္တရာယ်အချက်များမတော်တဆစိတ်ဒဏ်ရာ, ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်းမှစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးများပါဝင်သည်။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့-related အချက်များစီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်, နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ, အရက်အလွဲသုံးစားမှု, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်မြင်းစီးများပါဝင်သည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအမြဲတမ်းနောက်ခံအကြောင်းရင်းအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းရှိတယ်။
အမျိုးသားများအတွက် erectile အခက်အခဲများတားဆီးများနှင့်ပုံမှန်စိုက်ထူ restore ၎င်းတို့၏တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းနိုင်ပါတယ်။ သုတေသန 40 လအတွင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဘို့အ erectile အခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့သောယောက်ျား၏ 6%3လ6များအတွက်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်လေ့ကျင့်ခန်းဖျော်ဖြေပြီးနောက်ပုံမှန်စိုက်ထူပြန်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ ယောက်ျားတစ်ဦးထပ်မံ 35% ဟာသူတို့ရဲ့ကျောမှု (Dorey et al 2004) တိုးတက်လာသည်။
ဆီးစပ်ကြမ်းပြင်ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းအကောင်းဆုံးသူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးကုထုံးအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းဆုံးမသွန်သင်ကြသည်။ သူတို့က '' လေတိုက်၏ထိန်းချုပ်အဖြစ်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားတင်းကျပ်နှင့်ရုတ်သိမ်းရေး '' အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာယောက်ျားကျင့်သုံးသည့်အခါဤအကြွက်သားကိုချီကြွဆင်းတွန်းမှရှောင်ရှားရန်အရေးကြီးပါသည်။ တစ်မှန်ကန်သောကျုံ့စဉ်အတွင်း, သင်သည်သင်၏ဝှေးမြင့်တက်နှင့်သင့်လိင်တံသင့်ခန္ဓာကိုယ်သို့အနည်းငယ်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လိင်တံ flaccid နေဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ယင်းတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားတင်းကျပ်သည့်အခါအများဆုံးအားထုတ်မှုကြွက်သားခွန်အားနှင့်အမြောက်အများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ အဆိုပါကျုံ့၏အရည်အသွေးဖျော်ဖြေအရေအတွက်ထက် ပို. အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကျုံ့နိုင်သမျှများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီမှသီးခြားအချိန်အရှည်အဘို့ကျင်းပပေမယ့်မရှိတော့ 10 စက္ကန့်ထက် 10 စက္ကန့်တစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူအဆင့်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်သင့်သည်။
အဆိုပါတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားမီနှင့်ထိုကဲ့သို့သော, ချောင်းဆိုးခြင်း, နှာချေခြင်းရုတ်သိမ်းရေးနှင့်အတူထိုင်လျက်ကနေမြင့်တက်လာအဖြစ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဝမ်းဗိုက်ဖိအားတိုးမြှင့်ပေးသောစိတ်အားသန်သောလှုပ်ရှားမှုများစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်ရပါမည်။
အချို့သောရှည်တည်တံ့ပြည့်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ခံနိုင်ရည်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, ဒီထက်ခိုင်မာတဲ့ကျုံ့ဖျော်ဖြေရပါမည်။ လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအချိန်ကျော်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြွက်သားအားပေးဖို့, လမ်းလျှောက်နေတုန်းအနည်းငယ်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားကျုံ့ထားတဲ့ကြိုးပမ်းမှုရှိသင့်ပါသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေသောလူများ, မှန်ကန်စွာသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ပေးထားသောအကြံပေးချက်လိုက်နာတစ်ဦးထက်ပိုသောအောင်မြင်သောကုသမှုရလဒ်ကိုရှိသည်ပြသခဲ့ကြသည်။
မှစ. နောက်ထပ်အမြင် AskMen.com
သုတ်ရည်လွှတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းအများအပြားယောက်ျားများအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာ, သူတို့ကမကြာခဏတက်ရောက်စေဖို့လည်းရှက်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်သလဲ? အဘယ်သို့ငါမဟုတ်တော့ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်, နူးညံခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ဘူးဖြစ်? အဖြေယောက်ျားတို့အတွက် Kegel လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေအားဖြင့်သင့် pubococcygeus ကြွက်သား (PC) ကြွက်သားထွက်အလုပ်လုပ်သည်။
PC ကြွက်သားများသည်သုတ်ရည်နှင့်ဆီးစီးဆင်းမှု၊ စိုက်ထူစဉ်အတွင်းသင်၏လိင်တံ၏မြဲမြံမှုနှင့်သင်၏သုတ်ရည်လွှတ်မှု၏စွမ်းအားကိုထိန်းချုပ်သည်။ သူတို့ကအရေးကြီးတယ်၊ အကယ်၍ အားစိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ရွှေရောင်နှစ်တွေထဲမှာမင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်နဲ့တွေ့မြင်လိမ့်မယ်။ Kegel သည်လူတို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကြီးသောအရာမှာသင်မည်သည့်အချိန်၌မဆို၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။
သငျသညျပိုရှည်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်ရဲ့အော်ဂဇင်နှင့်သုက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်နှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်, ပေါင်းသင်တို့သည်ဤ Kegel များအတွက်တင်ပြသောလေ့ကျင့်လျှင်သင်သည်သင်၏စိုက်ထူနဲ့စိုစွတ်သောမျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုတက်ကိုင်နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏ဆက်ပြောသည် kudos ရစေခြင်းငှါ လူတို့သညျ။
ကြှနျတေျာ့ကို PC ကြွက်သားတွေဟာဘယ်မှာငါဘယ်လိုသိရသလဲ
အလွယ်ကူဆုံးနည်းကတော့နောက်တစ်ခါရေချိုးခန်းသွားတဲ့အခါသင့်ဆီးစီးဆင်းမှုကိုရပ်လိုက်ပါ။ သူတို့ကိုသီးခြားခွဲထုတ်နိုင်သည့်နောက်တစ်နည်းမှာသင်၏လက်ချောင်းကိုသင်၏စအိုထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်း၊ သငျသညျမှန်ကန်တဲ့ကြွက်သားကျုံ့တဲ့အခါ, သင်၏စအိုတင်းကျပ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုရှာရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့တည်ရှိရာနေရာကိုအတိအကျသိရှိရန်လေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဗိုက်နာခြင်း၊ တင်ပါးသို့မဟုတ်ပေါင်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကြွက်သားများအားအလွန်အကျွံလျော်ကြေးပေးရန်လွယ်ကူသည်။ အမျိုးသားများအတွက် Kegel လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အခါအားလုံးသည်စိတ်အေးအေးထားဖို့လိုသည်။
အခုတော့နေ့စဉ် Kegel မှပေါ်လူတို့သညျအဘို့အလေ့ရှိသည်။
မှတ်ချက်: အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်း, ကိုယ်လက်-အခမဲ့အမှုကိုပြုနေကြသည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ PC ကြွက်သားတွေနဲ့ပြုသကဲ့သို့သင်တို့ကိုသင့်လက်နှင့်ဘာမှ "ညှစ်" ပါဘူး။
kegel session တစ်ခု 1
လျင်မြန်စွာ clench နှင့် 10 စက္ကန့်ဘို့အကြိမ်ကြိမ်လွှတ်လိုက်ပါ။
Clench နှင့်5စက္ကန့်ဘို့အကြိမ်ကြိမ်လွှတ်လိုက်ပါ။
30 စက္ကန့်အဘို့သင့်ကို PC ကြွက်သားတင်းကျပ်ကိုင်ထားပါ။
အစုံအကြားတစ်ဦး 30 ဒုတိယချိုးယူပါ။
ယနေ့အဘို့အကန့်ပေမယ့်ဒီ Kegel တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်နေ့စဉ်ယောက်ျားတို့အတွက်တင်ပြသောပြန်လုပ်ပါ။
kegel session တစ်ခု 2
5 စက္ကန့်အဘို့သင့်ကို PC ကြွက်သား Clench ကိုင်ထားပါ။
လျင်မြန်စွာ clench နှင့်သင့် PC ကိုကြွက်သား 10 ကြိမ်လွှတ်လိုက်ပါ။
10 ၏အရေအတွက်အဘို့အရှည်လျားတိုတောင်းပြီးတော့ Activision နေတာအတွက်တနည်းသင့်ရဲ့ PC မှာကြွက်သား Clench နှင့်လွှတ်လိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ PC မှာကြွက်သားနဲ့ကိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လုပ်နိုင်သည်အဖြစ်များအတွက်တင်းကျပ်။2မိနစ်ရည်ရွယ်ပါသည်။
သငျသညျ2Kegel တစ်ပါတ်မှုအတွက်လူတင်ပြသောအဲဒီ session လုပျနိုငျ; သို့သော်သင်အလုံအလောက်ခွန်အားဖြစ်ကြ၏ခံစားရလျှင်တိုးဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ ထိုအလေ့ကျင့်ခန်းခိုင်ခံ့စေသည်ဟုအောက်မေ့လော့, ဒါရုံသငျသညျမဆိုအခြားကြွက်သားနှင့်အတူလိုလိုပဲဖြည်းဖြည်းချွတ်စတင်တည်ဆောက်ကြလော့။
kegel session တစ်ခု 3
sets: 30 (100 ထက်ပိုတက်သင့်ရဲ့လမ်းအလုပ်မလုပ်)
Clench နှင့်ထပ်ခါထပ်ခါသင့်ရဲ့ PC မှာကြွက်သားလွှတ်လိုက်ပါ။
သငျသညျဖြစ်နိုင်သည် (သင်သာသင့်ရဲ့ PC မှာကြွက်သားညှစ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာနိုင်ပါသည်) သလောက်တင်းကျပ်။
kegel session တစ်ခု 4
Clench နှင့်2မိနစ်နေ့တိုင်းအဘို့သင့်ကို PC ကြွက်သားကိုလွှတ်။
တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၂၀ - ၃ ကြိမ်လုပ်ရန်သင်၏လမ်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ - နောက်ဆုံးတွင်သင်တစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ကြိမ်လျှင်အကြိမ် ၂၀၀ ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာငါ Kegels ပွုနိုငျသနညျး/
သငျသညျ Kegel ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးယောက်ျား, အဘို့တင်ပြသောလုပျနိုငျ; သင်ဤလေ့ကျင့်လို့မရပါဘူးအလွန်နည်းပါးသောနေရာများရှိပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်အတော်လေးအာရုံပြံ့လှငျ့တှေ့ရပမေသကဲ့သို့သငျ, အခြားအရာတစ်ခုခုပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ကြိုးစားနေကြသောအခါဤလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့, သို့သော်, အကြံပြုသည်မဟုတ်။ သူတို့ကိုလုပ်ဖို့တစ်ဦးကအကြီးအရာအရပျတီဗီများ၏ရှေ့မှောက်၌သို့မဟုတ်အသွားအလာအလင်းအိမ်မှာညပ်နေစဉ်အိပ်ရာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကခံစားရနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်သိမည်အကြောင်း, ဒါကြောင့်သင့်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကခက်ခဲလိင်တံ, ပိုကောင်းတဲ့ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကြာကြာတည်တံ့လိင်ခိုင်မာတဲ့ကို PC ကြွက်သားရှိခြင်း၌ရှိသမျှသောအကြိုးကြေးဇူးမြားဖြစ်ကြသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်ဒီအရေးကြီးတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွက်သားရှိခြင်းမလုံးဝဆင်ခြေရှိပါသည်။ သငျသညျအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အတူဒုက္ခရှိပါကသင်ဆေးဆိုင်သို့မဟုတ်သင့်ကျန်းမာရေးကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဦးမတိုင်မီဤလေ့ကျင့်ခန်းကြိုးစားကြည့်ပါ။
ဒါကိုမလွန်ပါနဲ့ အထူးသဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုဆိုလိုသည်ဆိုပါကမိမိကိုယ်ကိုခေါင်းထဲသို့ထည့်ရန်မကြာခဏသွေးဆောင်သည်။ သို့သော်၊ သင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အခြားကြွက်သားများနည်းတူသင်အကြားလေ့ကျင့်ခန်းများအကြားရောဂါပျောက်ကင်းရန်အချိန်ပေးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်အနားယူခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံမနေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်ဇယားအတိုင်းသင်လိုအပ်သည်ဟုဆိုပါကမကြာမီတွင်သင်ဖြစ်သင့်သည်၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနားထောင်ပါ။ ၎င်းသည်အဘယ်အရာပြောနေသည်ကိုသိသည်။
အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာအခြားမည်သည့်ကြွက်သားကိုမသုံးပါနဲ့။ ဒါဟာသူတို့အားနည်းအထူးသဖြင့်လျှင်, PC ကိုကြွက်သားတွေခွဲထုတ်ဖို့တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။ သငျသညျဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါ, သင်အနားယူပြီးထပ်မံစတင်ပါဖို့လိုပါတယ်, ထို့နောက်အခြားမည်သည့်ကြွက်သား (အဓိကအားဖြင့်ဝမ်းဗိုက်နှင့်ခါး) စာချုပ်ချုပ်ကြသည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရလျှင်။ ကိုယ့်အချို့အစွမ်းသတ္တိကိုတည်ဆောက်မယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ယူအံ့သောငှါသတိရပါ။ ကမှာထားပါ။
လူတိုင်းကဤလေ့ကျင့်ခန်းပြုနိုင်သည်, သူတို့သည်လူတိုင်းအတွက်လိင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ သင်နှင့်သင့်လက်တွဲဖော်ကဤလေ့ကျင့်ခန်းပြုလျှင်သင်တို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးရက်သတ္တပတ်အတွင်းကွာခြားချက်မြင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ အမြိုးသမီးမြားကိုပိုမိုပြင်းထန်သော orgasm ရှိသည်နှင့်ကသူမ၏အတွင်းပိုင်းရဲ့နေချိန်မှာသင့်ရဲ့လိင်တံ "ညှစ်" နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင်သည်သူမ၏လိင်အင်္ဂါအတွင်း၌သင့်စိုက်ထူမှုကိုအနားယူသော်လည်းမတွန်းလှန်နိုင်ခြင်းဖြင့်သူနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံးက PC ကြွက်သားတွေကိုတွန်းအားပေးနိုင်တယ်။ ဒါကသူမ G-spot ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးသင်လည်း tickle ပါ။ သင်၏တိုးတက်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်၏လိင်စွမ်းရည်သည်အကြောင်းများစွာအပေါ်မူတည်သည်။ ဤအရာများထဲမှအများစုကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည် - အာဟာရရှိသောအစာကိုစားခြင်း၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုကျန်းမာစေခြင်း။ သင်၏ PC ကြွက်သားသည်သင်၏လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်၎င်းကို၎င်းကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပေးဆောင်သည်။ အခုမင်းမှာနည်းလမ်းတွေရှိတယ်၊ ဆင်ခြေပေးစရာနေရာမရှိဘူး။
ဒီနေရာမှာအခြေခံ kegels တွေပါတဲ့ဗီဒီယိုပါ။
ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည်အထိကြွက်သားကိုအမြန်ညှစ်လိုက်တယ်၊ အဆ ၁၀၀ ကျော်ဆက်တိုက်မှန်းဆလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့တာမိနစ်အနည်းငယ်သာကြာသည်။ တခြားရက်တွေမှာတော့ ၅ စက္ကန့် ၂၀ စက္ကန့်လောက်ညှစ်ထားတယ်။ အိပ်ရာမဝင်ခင်အိပ်ရာထဲမှာကျွန်တော်အိပ်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ကိုငါနေ့တိုင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်တစ်ခါတစ်လေမှာ (တကယ်တော့ငါမကြာခဏမေ့လျော့လိမ့်မယ်) ကိုမေ့လျော့လိမ့်မယ် ရလဒ် ၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်အကြာတွင်စတင်ပြသမည်ထင်သည်။ မင်းကိုနေ့စဉ်ရိုးသားစွာလုပ်ရမယ်လို့မထင်ဘူး ဒါဟာလေ့ကျင့်ရန်အလွန်ခက်ခဲမထင်ထားဘူး။
လူတစ်ယောက်၏အကြံဥာဏ် - တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကိုအခြားကြွက်သားများကဲ့သို့လုပ်ပါ။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ဒစ်သည်ပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကေဂျယ်လ်လုပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေဘယ်လောက်သိတယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ငါတကယ်သိခဲ့တာကြာပြီ (တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာပြီ) သူတို့သိခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာငါ့စွမ်းရည်နဲ့ပြproblemsနာတွေဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါဟာအလွန်အားနည်းနေတဲ့စိုက်ထူမှုဆီသို့ ဦး တည်သွားနိုင်တဲ့ရထားကိုကျော်လေ့ရှိတယ်။ သို့သျောလညျးငါယခုငါ့အဘို့အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပုံရသည်တဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထွက်တွက်ဆနဲ့ငါ့စိုက်ထူအရည်အသွေး (EQ) ၏တိုးတက်မှုအလွန်သိသာသည်။
ပထမ ဦး စွာ kegels ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသင်မသိရင်အောက်က link မှာကောင်းကောင်းရှင်းပြထားတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Kegel သလားဖို့ကိုဘယ်လိုယောက်ျားများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း: အမျိုးသား Kegeling မှတစ်ဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန်
အစဉ်အမြဲငါသူတို့ကိုလုပ်နေတာကြိုးစားခဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ခန့်နှစ်ခုမှသုံးပတ်ကြာအကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူအရည်အသွေးအမှန်တကယ်ကွာခြားချက်ခံစားရတယ်။ စာသားအစားဝက် assed ဖြစ်ခြင်း၏ကအိမ်ခေါင်မိုးမှာဖြောင့်ညွှန်ပြမယ်လို့အများကြီးပိုမိုအားကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ တစ်ခုတည်းသောအရာငါအတိတ်ကာလတိုင်းတစ်ခုတည်းအချိန် Over-လေ့ကျင့် (နှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ကောင်းသောသက်ရောက်မှု negate လိုသိပ်ချွတ် jerking တက်အဆုံးသတ်) မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုငါတွေ့ပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုစောင့်ရှောက်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုနားထောင်သည်။ ငါ kegel လုပ်ပြီး ၃-၅ စက္ကန့်လောက်ကြာအောင်ဆက်လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်ဒါကိုနှစ်ဆယ့်ငါးကြိမ်လုပ်မယ်၊ တစ်မိနစ်လောက်ခဏနားပါ။ ငါပြန်ရောက်တဲ့အခါငါ ၁၅ ကီလိုဂရမ်လောက်လုပ်မယ်။ နောက် ၁၀ ပြန်မလာခင်မှာနောက်ထပ်ချိုးယူမယ်။ ဒါဆိုစုစုပေါင်း ၅၀ ။ ငါအဆုံးသတ်ဆီသို့ ဦး တည်သည်, ငါ့ kegelling သကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့မခံစားရဘူးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် သင်၏ kegels များသည်အားနည်းနေပြီးအားနည်းသည်ဟုခံစားရသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသင့်အားရပ်ရန်ပြောသည်။ ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနှင့်၊ ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင်မလုပ်ပါနှင့်။
လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဟာ ၅၀ ကီလိုဂရမ်တစ်နေ့ကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​သူတို့ကအားမရှိကြဘူးလို့ခံစားရရင်တစ်ခါတစ်လေနှစ်ရက်ကွာဟမှုတောင်တောင်ရှိတယ်။ ယခုသင်ခန်းစာတစ်ခုစီနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ kegels သည်တဖြည်းဖြည်းပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်ကိုသတိပြုမိပြီး PC ကြွက်သားများပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အစွမ်းထက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုမျှော်လင့်ချက်များစွာပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ EQ သည်ယခင်ကထက်ယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မနက်ခင်း၌ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသော်လည်းတောင်မှလျောက်ပတ်သောသစ်သားဖြင့်နှိုးနေသည်။
လိင်မှုကိစ္စမှာသွားတဲ့ Kegels တွေအတွက်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကဒီမှာပါ။
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်လေ့ကျင့်ခန်း (Kiegels) လုပ်နေတာနဲ့ကျွန်မသုတ်ရည်လွှတ်ကာကွယ်ပေးနိုင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူအော်ဂဇင်ချဉ်းကပ်အဖြစ်တင်းကျပ်စွာတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားစာချုပ်ချုပ်ခြင်းဖြင့်ထွက်စတင်ခဲ့သညျ။ ငါ (သုတ်ရည်လွှတ်ရပ်တန့်ဖို့) ကို Daoist လက်သုံးချောင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. ငါညင်ညင်သာသာငါသူ့ဟာသူသန့်စင်သောကြွက်သားထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူကကိုင်ထားနိုင်ဘူးသောအခါငါသုတ်ရည်လွှတ်ပိတ်ဆို့ဖို့လိုအပ်ငယ် "အပို" ပေးနိုငျခဲ့ကွောငျးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ကျွန်မ ejaculating မပါဘဲတစ်ဦးအော်ဂဇင်ရှိသည်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်မရှိ, သုတ်ရည်ဖြန့်ချိခဲ့လို့ငါ့အစွမ်းအင်အဆင့်ကိုမြင့်မားတဲ့ကနျြငါ့စိုက်ထူကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အပေါ်ကိုဆက်လက်ပေးနိုင်ခဲ့ - ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအခြားအော်ဂဇင်ရှိသည်။
အများကြီးအလေ့အကျင့်, ငါနောက်ဆုံးမှာငါမရှိတော့အားလုံးမှာမဆိုလက်ညှိုးကိုဖိအားလျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်တင်းကျပ်စွာငါ၏အတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သား flexing အားဖြင့်သုတ်ရည်လွှတ်တားဆီးနိုင်ခဲ့သောအချက်တယ်လမ်းတစ်လျှောက်အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူ။ ကျွန်မတစ်ဦး "ခြောက်သွေ့တဲ့" အော်ဂဇင်ရှိသည်နှင့်ထို့နောက်အပြည့်အဝ "စိုစွတ်သော" ejaculatory အော်ဂဇင်နှင့်အတူအချို့သောအချိန်နှင့် finish ကိုအဘို့အပေါ်ဆက်လက်မယ်လို့ရှိရာငါ့အချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံသို့ဤအလေ့အကျင့်ဘာသာပြန်ဆိုနောက်ဆုံးမှာနိုင်ခဲ့သည်။
နှစ်ခု orgasm တဦးတည်းထက်ပိုကောင်းခဲ့ကြပြီးကတည်းကငါဒီကိုယူနိုင်ကြောင်းဘယ်လောက်ဝေးကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တယ် - နှင့်ငါ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးအလွယ်တကူ Multi-orgasm ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကငါတန်းတူရည်တူရှာဖွေနေခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စငါအတိတ်နှစ်ခု orgasm ရဘယ်တော့မှနိုင်ခဲ့ဘူးမည်မျှ "Kiegels" ကျင့်သုံးသို့မဟုတ်ဘယ်လောက်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သတ်မှတ်မယ်လို့ငါမယ့်သူကနောက်ကျော "ကိုင်" နိုင်ဘူး။ ထိုသို့ငါအလွန်တင်းကျပ်စွာငါ့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်တိုက်ခိုက်နေနှင့်အလွန်တင်းမာနေသောကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်သင့်ကြောင့် "စိတ်ကျေနပ်စရာ" အဖြစ်မဟုတ်ခဲ့ခဲ့သကဲ့သို့ပျြောမှေ့စ။
ဤအချိန်တွင်ငါ Epiphany ခဲ့ရပြီးတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်စတင်ခဲ့သည်။ ကြှနျတေျာ့ "အလုပ်" ပဲစိတ်အေးလက်အေးနေဖို့နှင့်အာရုံကိုခံစားဖို့ဖြစ်တယ်စဉ်အကြှနျုပျ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးဆွပေးလိမ့်မယ်။ သူမသည်ပျဉ်ပေါ်တွင် "မှော်" ပွဲချင်းပြီးသူမ၏လက်ချောင်းများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်အပန်းဖြေငါ၏ပြည်နယ် "စောင့်ကြည့်" နှင့်သောအခါငါတက်တင်းမာနေလိုအပန်းဖြေဖို့ငါ့ကိုသတိပေးနှင့်အပြန်အလှန်သူမကသုတ်ရည်လွှတ်အံ့ဆဲဆဲခဲ့တာအခါမကြာမီကျုံ့ခံစားရနှင့်ရှေ့မှာဆွရပ်တန့်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သိပ်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။ အတူတူကျနော်တို့ arousal တစ်ခုအလွန့်အလွန်မြင့်မားတဲ့အဆင့်အထိကြှနျုပျကိုပို့ဆောငျနှင့်တိုးချဲ့ကာလအဘို့ဤပြည်နယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့တယ်။ ပိုကြှနျုပျတို့သညျဤအတူငါပင်အော်ဂဇင်ချဉ်းကပ်အလွန်မြင့်မားသောပြည်နယ်များမှာဖြစ်လာခဲ့သည်ပိုမိုအဆင်ပြေစမ်းသပ်။ သော့ကိုတစ်ဦးအလွန်စိတ်အေးလက်အေးပြည်နယ်အတွက်ဆက်လက်တည်ရှိခြင်းနှင့်စာချုပ်ရန်သုတ်ရည်လွှတ်ထိန်းချုပ်သောတင်ပါးဆုံတွင်းကကြွက်သားတွေခွင့်မပြုဖို့ဖြစ်တယ်။
လွတ်မြောက်ရေးအတွက်နှောင့်နှေးလျှင်, ခန္ဓာကိုယ်အသိကိုဆက်လက်လှုံ့ဆျောမှု add ဖို့အပျော်အပါးနဲ့အတူ Endorphins တိုးပွားစေပါသည်။ ကျနော်တို့ငါများသောအားဖြင့်တစ်ဦး ejaculatory အော်ဂဇင်စဉ်အတွင်းလက်ခံရရှိထက်ပိုပြီး "အပျြောအပါးဓာတုပစ္စည်း" လွှတ်ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry နှင့် "လှည့်ကွက်" ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အားသာချက်ယူနိုငျခဲ့ကွတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်အပွညျ့အဝဖို့ကအပေါ်တိုးချဲ့ဒါကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤဟာအလွန်ဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တိုးချဲ့ကစားစဉ်ကာလအတွင်းအချို့သောပြည့်နှက်သောပမာဏကိုရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရှေးခေတ် Taoists များဖော်ပြသည့်အတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတစ်ခုလုံးကို“ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွေ့အကြုံ” သို့မဟုတ်“ Waves of Bliss” စသည်တို့အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဤ "Bliss of Wiss" သည်အရသာရှိသကဲ့သို့အရသာရှိသည့်အော်ဂဇင်များကဲ့သို့eသန္ဓေသားလောင်းသန္ဓေသား၏အဆုတ်အာရုံကြောဓာတုအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိဘဲကြာရှည်ခံနိုင်ခြင်း၏အားသာချက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အပျော်အပါးသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ သုတ်ရည်လွှတ်ရည်ကိုအော်ဂဇင်ပြုလုပ်လိုခြင်းထက်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်ပိုမိုလိုချင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဇင်မဟုတ်သောဆက်လက်ရှိနေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏“ ယောက်ျား” လိင်စွမ်းအင်ကိုသတိရှိရှိထိန်းချုပ်ရန်နောက်ထပ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။
ရှုထောနောက်ထပ်အချက်: Kegels ပွုလုပျခွငျးကိုရပ်တန့်: အမျိုးသမီးများနေ့ (နှင့်အမျိုးသားများအတွက်) သည်ရီးရဲလ်ဆီးစပ်ကြမ်းပြင်အကြံဉာဏ်
အဘယ်ကြောင့် Kegels နောက်ပြန်သလား?
ပိုကောင်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကပျော်မွေ့ချင်သူကိုယောက်ျားပြောင်းပြန် kegels လုပ်နေတာမှအကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ အားကြီးသောရှိခြင်းနှင့် arousal ပြီးနောက်လိင်တံစိုက်ထူကျန်းမာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ဒီဝေဖန်အမှတ်မှာအော်ဂဇင်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ထိန်းချုပ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပြောင်းပြန် kegel လိင်တံသွေးတွန်းအားပေးရန်ကူညီပေးသည်နှင့်သူတို့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပိုပြီးခံနိုင်ရည်ဖြစ်လာနိုင်အောင်ကြွက်သားကြက်; ဒီ arousal ၏တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးပိုပျော်စရာကိုကျန်းမာသန်စွမ်းလိင်တံကိုစောင့်ရှောက်ကူညီလိမ့်မည်။
ကို Reverse Kegel လေ့ကျင့်မှုဖျော်ဖြေ
သင့်ရဲ့ပြောင်းပြန် kegels လေ့ကျင့်ရန်တိတ်ဆိတ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကရာအရပျကိုရှာပါ။ သင်ချက်ချင်း technique ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ကဲ့သို့သင်တို့မခံစားရဘူးလျှင်သင်ပထမဦးဆုံးစတင်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူ, ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်မည်သည့်ကြားဖြတ်မရှိဘဲအရပ်သို့အခြေချဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သင်သည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:
1 ။ လုံးဝ penile ဧရိယာအနားယူနှင့်တင်းမာမှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏သငျ့စိတျရှင်းလင်းပါ။ သငျသညျအသှေးကိုသင့်ရဲ့လိင်တံထဲသို့စီးဆင်းနိုင်အောင်အေးဆေးနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ချင်တယ်။
2 ။ အဆိုပါ penile ကြွက်သားစာချုပ်ချုပ်စတင်ဖို့။ တတ်နိုင်သမျှဖြေလျော့ပေးခြင်းဟာတင်ပါးဆုံတွင်းဧရိယာ၏ကျန်စောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်သင့်ရဲ့လိင်တံ၏အရှေ့ဘက်အနီးကြွက်သားစာချုပ်ချုပ်အာရုံစိုက်ပါ။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်သင့်ရဲ့လိင်တံကိုပိုမိုအားကောင်းနှင့်ပိုပြီးအမှန်တကယ်တစ်ခုစိုက်ထူမလိုဘဲစိုက်ထူဖြစ်လာပါစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
3 ။ သင် penile ဧရိယာအတွင်းရှိကြွက်သားတွေကိုထုတ်တွန်းအဖြစ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်ရှူသာထိပ်နှင့်လိင်တံ၏အနိမ့်ဆုံးကိုခိုင်ခံ့စေအပေါ်အာရုံစိုက်ထိန်းသိမ်းရန်။ တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့လိင်တံအောက်ရှိကြွက်သားတွေဟာဘယ်လိုဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်၏မှတ်ချက်ကိုယူပါ။
4 ။ အဆိုပါကျုံ့သွားနှင့်ပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာသင် exhale အဖြစ်ရှူကြပါစို့။ သင့်ရဲ့လိင်တံကိုတဖန်အခြားအသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းနှင့်စာချုပ်ယူထို့နောက်အနားယူကြပါစို့။ သင်သာသင့်ရဲ့လိင်တံ၏ရှေ့အာရုံစိုက်နေကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ, ကြွက်သားအနားယူထို့နောက်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကိုင်ထားထွက်တွန်း။
5 ။ သင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူသက်သာခံစားရနိုင်အောင် session တစ်ခုနှုန်းမှာအနည်းဆုံး 10-15 ကြိမ်သံသရာပြန်လုပ်ပါ။ တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုပထမဦးဆုံးမှာအဆင်မပြေခံစားရပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ကျုံ့ပြင်ပတတ်နိုင်သမျှလျော့ရဲရဲနဲ့ကြွက်သားကိုစောင့်ရှောက်အာရုံစိုက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့လိင်တံသန်မာဖြစ်လာသကဲ့သို့သင်တို့ session တစ်ခုနှုန်း 40-50 လေ့ကျင့်ခန်းရန်သင့်လမ်းကိုတက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကို Reverse Kegels ဖျော်ဖြေများအတွက်သိကောင်းစရာများ
သငျသညျပြောင်းပြန် kegel လေ့ကျင့်ခန်းမှာအစပြုသူဆိုရင်, ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်အတွက်ဤအကြံပြုချက်များအချို့ကိုသုံးပါ:
သငျသညျလျှင်အဖြစ်တိုကျရိုကျ penile ကြွက်သားများကျုံ့သက်သာရာအာရုံစိုက် '' သွားလာရင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်။ '
ဆီးနေချိန်မှာသင်ကပြောင်းပြန် kegel ကျုံ့တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်; မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သင်ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်းမှာဆီးနိုင်အောင်ပိုပြီးစွမ်းအင်နှင့်အတူလိင်တံထောက်ပံ့အာရုံစိုက်ဖို့လိုပေမည်။ ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပေါ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုသငျသညျ ejaculating နေကြသည်အခါကြွက်သားတွေလွှတ်ပေးပြီးအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျခှနျအားဗလနှင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသင့်ရဲ့ကျုံ့အတွက်သိသိသာသာတိုးသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, အဆိုပါထွင်ထားတဲ၏တိုကျရိုကျဧရိယာ၌ သာ. အားထုတ်တည်ဆောက်နိုင်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာဆက်လက်
Kegel လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းဆီးနှင့်ထပ်မံသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံတိုးမြှင်သင့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်, ဆီးအိမ်ကြွက်သားတွေခိုင်ခံ့စေမည်။
ကို Reverse Kegels အကြောင်းကတခြားသတင်းအချက်အလက်
kegel လေ့ကျင့်ခန်းကျွမ်းကျင်ဖို့အချိန်ကြာနိုင်ပါတယ် reverse ပေမယ့်သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သောအကောင်းဆုံး technique ကိုသင်ယူဖို့ကအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သငျသညျအသှေးကိုလေ့ကငျြ့ခနျးစတင်မတိုင်မီသဘာဝကျကျစီးဆင်းပါစေနိုင်ရန်အတွက်တစ်ခုလုံးကို penile ဧရိယာအနားယူရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဧရိယာ၌ဆောကျအဘယ်သူမျှမတင်းမာမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုလည်းမရှိသောကြောင့်အလွန်တည်ငြိမ်ပြီးစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်; အောင်မြင်စွာလေ့ကျင့်ခန်းဖျော်ဖြေတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, သငျသညျ, ထိုဧရိယာအများကြီးလာမည်ဟုဆိုသည်ကြောင်းခံစားရအားကောင်းသင်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုတစ်အများကြီးပိုကောင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။